रक्तस्राव (Bleeding) कसरि रोक्न सकिन्छ ? - Varient - News Magazine
रक्तस्रावको अर्थ शरीरको कुनै पनि भागमा रक्त नलीहरूबाट रगन बग्नु हो, जसलाई अंग्रेजीमा “ब्लीडिंग“ भनिन्छ। रक्तस्राव शरीरको बाहिरी वा आन्तरिक रुपमा हुन सक्छ। छालामा काटिएको कारण रगत शरीरबाट बाहिर आउन थाल्छ वा रगत मुख, योनी, मलद्दार वा नाकबाट पनि बाहिर निस्कन सक्छ। रक्तस्राव शरीरको कुनै पनि भागबाट हुन सक्छ।
यदि कसैलाई चोट लागेको छ र रक्तस्राव छ भने, चाँडै प्राथमिक उपचार दिनु महत्वपूणर् हुन्छ। धेरै जसो केसहरूमा, ठीक तरिकाले प्राथमिक उपचार दिएर रक्तस्राव रोक्न सकिन्छ। तर केहि केसहरुमा भने, धेरै रक्तस्रावको कारण शरीरको अंगहरुमा असर पुग्छ र व्यक्तिको मृत्यु समेत हुन सक्छ।
यस लेखले के कारण रक्तस्राव हुन्छ, रक्तस्रावका प्रकारहरू, रक्तस्राव रोक्ने उपायहरू, र रक्तस्राव हुँदा कतिबेला डाक्टरकोमा जाने भनेर वणर्न गर्दछ।
के कारण रक्तस्राव हुन्छ?
रक्तस्रावको सबैभन्दा सामान्य कारणहरू चोटपटक वा बिरामी हुन्। कुनै पनि रक्तवाहिनी चोटपटकका कारण फुट्न सक्छ जसले गर्दा शरीरको बाहिरी सतहबाट रगत बग्न थाल्छ। कहिलेकाहिँ चोटपटकका कारण बाहिरी छाला काटिएको हुँदैन, तर रगत वाहिन फुटेको कारण छाला भित्र रगत बग्न थाल्छ र हामीले छालामा केही दाग देख्न थाल्छौं, जसलाई हामी सामान्य रूपमा इन्डिगो भन्छौं। शरीर बाहिर रक्तस्राव को सामान्य कारणहरु छाला छिल्ने काट्नु हो जुन दुर्घटना वा छालामा सुई वा चक्कु जस्ता चीजहरूले काट्दा हुन्छ। यदि घाउ सानो छ भने, शरीरले रगतको गुप्तीहरू स्वतः बनाउन थाल्छ, ताकि अधिक रगत घाउबाट बाहिर आउँदैन, तर यदि घाउ ठूलो छ भने, रगतको थोप्लाहरू रक्तस्राव रोक्न सक्दैनन् र हामीलाई प्राथमिक उपचार चाहिन्छ। शरीरमा आन्तरिक रक्तस्राव ल्युकेमिया, फोक्सोको क्यान्सर र कलेजो रोग जस्ता रोगहरूले गर्दा पनि हुन सक्छ।
रक्तस्राव दुई प्रकारका छन्।
आन्तरिक रक्तस्राव भनेको केहि कारणले गर्दा शरीरको भित्रबाट रक्तस्राव हुनु हो। यो धेरै रोगहरूबाट हुन सक्छ, जस्तै हेमोफिलिया, एन्डोमेट्रियोसिस, फोक्सोको क्यान्सर, भिटामिन के को कमी र मस्तिष्कमा चोटपटक, इत्यादि।
बाह्य रक्तस्रावको अर्थ छाला काट्नुको कारण शरीर बाहिर रगत बग्नु हो। यसका केहि कारणहरू छन्, अक्सिडेन्ट, कुनै पनि तिखो चिज शरीरमा प्रवेश गर्दा वा गोली लाग्दा आदि।
रक्तस्राव रोक्ने उपायहरु।
यदि तपाईं वा तपाईंको वरपर कसैलाई चोट लागेको छ र रक्तस्राव भएको छ भने, तपाईं निम्न तरिकाले प्राथमिक उपचार गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा पहिले, घाइते व्यक्ति शान्त रहन आवश्यक छ किनकि मानीस आतिदाँ डरको कारणले मुटुको धडकनको दर बढछ र उच्च रक्तचाप हुन्छ, जसले रगतलाई द्रुत बहाउँदछ।
घाइते व्यक्तिलाई शान्त र आश्वस्त पार्नुहोस्।
यदि धेरै रक्तस्राव भएको छ भने, एम्बुलेन्सलाई कल गर्नुहोस् वा व्यक्तिलाई अस्पतालमा लैजानुहोस्।
घाउँ लाई नहल्लाउनुहोस।
यदि घाउ व्यक्तिको टाउको, घाँटी, पछाडि वा खुट्टामा छ भने, व्यक्तिलाई बिलकुलै नहल्लीकन बस्न लगाउनुहोस।
यदि घाउमा धूलो वा धूलो छ भने, यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस्। (थप पढ्नुहोस् ( स्पाइनल कर्ड चोटको लक्षण)
हतियार वा अन्य चीजहरू छालामा घुसेको छ जस्तै सुई वा धारीलो बस्तहरु हटाउने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यसो गर्दा थप असर पर्न सक्छ र ब्लीडिंग बढ्न सक्छ।
रगत रोक्नको लागि घाउमा पट्टी, वा सफा कपडा राख्नुहोस् र त्यसमा बिस्तारै दबाब दिनुहोस्।
यदि घाउ आँखामा छ भने, साबधानी रहनुहोस।
यदि सम्भव छ भने, घाउलाई हृदयको चरण भन्दा माथि उठाउनुहोस्।
यदि पट्टी लगाए पछि पनि रगत बाहिर आउँदैछ भने पट्टीलाई नहटाउनुहोस्, बरु दबाब दिनुहोस्।
यदि रक्तस्राव बन्द भएको छ भने, पट्टी हटाएर घाउलाई हेर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यो गर्नाले फेरि रक्तस्राव हुन सक्छ।
रक्तस्राव बन्द भएपछि, पट्टी माथी केहि कपडा राख्नुहोस् ताकि पट्टी त्यस ठाउँबाट सर्न सक्तैन। यस पछि, आइस प्याकलाई पट्टीको माथी राख्नुहोस्।
रक्तस्राव रोकथामका अन्य प्रकारहरू।
नाकबाट रक्तस्राव कसरी रोक्न सकिन्छ?
आफ्नो नाक बिस्तारै दबाउनुहोस्।
टाउको पछाडि झुकाउनुहोस् र नाक समात्नुहोस्।
केही समयको लागि आफ्नो मुखबाट सास फेर्नुहोस्।
जबसम्म रक्तस्राव बन्द हुँदैन पूणर् रूपमा आराम गर्नुहोस्।
योनि रक्तस्राव कसरी रोक्न सकिन्छ?
सर्वप्रथम, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि रगत योनीबाट वा गुदाद्वारबाट आउँदैछ। यो सुनिश्चित गर्न तपाईं योनीमा टेम्पनहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि अत्यधिक रक्तस्राव भएको छ भने, टेम्पन वा प्याडमा राख्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् ताकि तपाईंको लुगा नब्रिगियोस। तपाईंले कति प्याडहरू वा टेम्पनहरू प्रयोग गर्नुभयो याद गर्नुहोस ताकि तपाईं डाक्टरलाई बताउन सक्नुहुन्छ।
गुदा वा मलद्दार क्तस्राव कसरी रोक्न सकिन्छ?
गुदाद्वारबाट रक्तस्राव गम्भीर समस्याको संकेत हुन सक्छ, त्यसैले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो डाक्टरमा जानुहोस्।
लामो समयसम्म चर्पीमा नबस्नुहोस्।
यदि दिशा आउँदैछ भने, रोक्ने प्रयास नगर्नुहोस्।
प्रभावित क्षेत्र मा आइस प्याक राख्नुहोस्।
कसरी मुखबाट रक्तस्राव रोक्न सकिन्छ?
प्रत्येक १ देखि २ घण्टामा चिसो पानीले मुख कुल्ला गर्ने।
यदि टुक्रिएको दाँत वा मुखमा कुनै घाउको कारण रक्तस्राव भएको छ भने, त्यहाँ सफा कपडा वा टिशू राखेर दबाब दिनुहोस्। त्यो कपडा वा टिशू मुखमा ८ देखि १० मिनेटसम्म समात्नुहोस्।
यदि ओठ फुट्ने कारणले रगत बाहिर आउँदैछ भने, केही समयको लागि ओठमा चिसो टिश्यू वा कपडा राख्नुहोस्।
रक्तस्राव भएको खण्डमा, निम्न अवस्थामा तपाईं डाक्टरकोमा जानुहोस्।
यदि तपाईंलाई रक्तस्राव विकार सम्बन्धि समस्या छ।
यदि तपाईं रगत पातलो गर्ने औषधि लिनुहुन्छ।
यदि घाउ गहिरो छ वा खुला छ भने।
यदि घाइते व्यक्ति आघातमा पुगेको छ वा ज्वरो आएको छ भने।
यदि घाउ व्यक्तिको अनुहारमा छ भने।
यदि घाउबाट धुलो र फोहोर बाहिर आउँदैन भने।
यदि रक्तस्राव गम्भीर चोटपटकको कारणले हो।
यदि घाउमा संक्रमण हुने लक्षणहरू जस्तैः रातोपन, डिस्चार्ज, वा पीडा जब हात ले छुदाँ महसुस हुन्छ भने।
रक्तस्राव रोक्न टाँका आवश्यक हुन्छ भने।
यदि घाउको वरिपरिको भाग सुन्नीएको छ।
यदि हतियार वा अन्य वस्तुहरू घाउमा अड्किएका छन् भने।
यदि कुनै जनावरले टोकेको हो।
यदि घाउ गहिरो छ र उसले बितेको ५ बर्षमा टिटेनसको इन्जेक्सन लिएको छैन।
यदि व्यक्ति विगत १० बर्ष सम्मपनि टिटानसको इंजेक्शन दिदै आएको छैन।